Taranja Anglisy any an-tsekoly Tsy tokony hasiana safidy izany
Zava-dehibe loatra ny fahaizana teny vahiny amin’izao fotoana izao ary saika miankina amin’ny fifehezana izany ny fahazoana asa.
Raha ny taranja Anglisy manokana dia tsy azo tsinontsinoavina intsony ary tsy tokony hasiana safidy fa tsy maintsy hataon’ny mpianatra araka ny nambaran’ny depiote lany tao Andramasina, Andriamanjato Liantsoa Bina. Tsy hita taratra ao amin’ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana (PGE) izany ary efa nosafosafoina fotsiny ny sehatra fanabeazana araka ny tatitra nataony. Ankoatra izay, nanambara ity solombavam-bahoaka ity fa mbola olana hatrany ny fandriampahalemana sy ny fahasalamana, indrindra ny fananan-tany any amin’ity distrika ity. Mitarazoka tanteraka ny olan’ny fananan-tany ary ireo manambola hatrany no tafavoaka amin’ny fikarakarana ny taratasy.